सेलाएपछि फेरि तताएर नखानुहोस् यी खानेकुरा,बिष सरह बन्छ ! | Rajmarga
सेलाएपछि फेरि तताएर नखानुहोस् यी खानेकुरा,बिष सरह बन्छ !
एजेन्सी – व्यस्त जीवनशैलीमा हामी धेरैजसो कि बाहिरको खाना खान्छौ, कि त घरमै भएका खाना सेलाएपछि तताएर खान्छौँ वा दुई पटक खाने खाना एकै पटक पकाएर राख्छौ र पछि तताएर खान्छौ । तर, के तपाईलाई थाहा छ, कुनै – कुनै खानेकुरा सेलाएपछि तताएर खाएमा स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ ? त्यसो भए, जान्नुहोस्, कुन–कुन खाना फेरि तताएर खान मिल्दैन ।
खाना पकाएको लामो समय भैसकेपछि चिसो भएका कारण होस् वा बँचेखुसेको खाना पुनः खाँदा होस् हामीले खानेकुरालाई तताएर खाने गर्छौँ । कहिलेकाहीँ ठूलो परिमाणमा पकाएको खाना धेरै जनाले फरक फरक समयमा खानुपर्दा धेरै पटक तताउनुपर्ने हुन्छ । घरमा बिहान पकाएको खाना धेरै हुँदा दिउसो र बेलुकी सम्म पनि खाने र त्यसो गर्दा पटक पटक तताउने गरिन्छ । तर विज्ञहरुका अनुसार पटक पटक खाना तताएर खानु हानिकारक हुन्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार धेरैपटक खानेकुरा तताउँदा पटक पटकको रासायनिक प्रतिक्रियाका कारण हानिकारक तथा विषाक्त पदार्थ समेत सिर्जना हुने र अर्थात् फुड प्वाइजनिङको खतरा पनि हुन्छ । यी खानेकुराहरु पकाइसकेपछि धेरैपटक तताउनु हानिकारक हुन्छः
पालुंगोको साग- पालुंगो लगायतका सागपातमा नाइट्रेट रसायन हुन्छ, जुन पटक पटक तताउँदा विषाक्त पदार्थमा परिणत हुन्छ ।
अण्डा- उच्च तापक्रममा पटक पटक अण्डा तताउँदा अण्डामा भएको प्रोटिनको रासायनिक परिवर्तन भई विषाक्त पदार्थको निर्माण हुने जोखिम हुन्छ । त्यसकारण एकपटक उमालिसकेको वा अम्लेट बनाइसकेको अण्डालाई फेरि फेरि नतताउनुहोस् ।
च्याउ- च्याउको तरकारी सधै ताजा मात्र सेवन गर्नुहोस् । बासी वा पकाएको लामो समय भएर पुनः तताएको च्याउ नखानुहोस् । च्याउ निकै संवेदनशील तरकारी हो । च्याउलाई पटक पटक तताउँदा यसमा भएको उच्च मात्राको प्रोटिन हानिकारक पदार्थमा बदलिन सक्छ ।
कुखुराको मासु- मानिसहरु कुखुराको मासुलाई फ्राइ गरेर राख्ने र तताउँदै खाँदै गर्न रुचाउँछन् । तर यसो गर्नु हानिकारक हुनसक्छ । किनकी कुखुराको मासुमा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ । जुन चिसो भैसकेपछि फेरि तताउँदा विषाक्त पदार्थमा बदलिन सक्छ ।
आलु-आलु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । तर यदि पकाएको आलुको परिकारलाई लामो समयसम्म फ्रिजमा राखेर फेरि तताएर नखानुहोस् । यसो गर्दा आलुमा हानिकारक रासायनिक प्रतिक्रिया भई आलुमा भएको तत्व विषाक्त पदार्थमा परिणत हुने जोखिम रहन्छ ।
चामल(भात) – काँचो चामलमा किटाणु हुन्छन् र पाकेपछि ति सबै मरेर जान्छन् । तर, पाकेको चामल सेलाएपछि फेरि बढ्न थाल्छन् र फेरि तताएपनि मर्दैनन् । त्यसैले, भात पाकेपछि ताजै खानेगर्नुहोस् ।
Previous post: देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु
Next post: गाईको पेटमा लुकेको छ एड्सको उपचार ! अनुसन्धानकर्ता दङ्ग
पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार ९८० कोरोना संक्रमण पुष्टि
पर्सामा थपिए १२४ जना कोरोना संक्रमित
चिसो बढेसँगै यस्ता रोगको संक्रमण बढ्दो
नर्भिक अस्पतालको Fully equipped COVID Isolation Ward आजदेखि संचालनमा
महानगरीय अपराध महाशाखा, काठमाडौंमा कार्यरत एक प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
कोभिड-१९को संक्रमणबाट ५ जनाको मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या ६३ पुग्यो
काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेसम्मकै धेरै १७२ जना संक्रमित थपिए